एक घण्टा अंगालो हालेर सुताए बापत यी युवतीले लिन्छिन् ५ हजार !
काठमाडौं । तपाईंले पक्कै सुन्नुभएको छैन होला, अंगालो मारेर पैसा कमाउन सकिन्छ । तर, यहाँ त्यस्तै भएको छ । एक महिलाले पैसा कमाउनका निम्ति यस्तै उपाय रचेकी छन् । यसलाई बुझेपछि तपाईं अचम्म पर्नुहुनेछ । तपाईंलाई सोध्यो भने यसरी सुत्न पक्कै तयार हुनुहुन्छ । तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ होला यस्तो नी हुन्छ र ? कसरी हुनसक्छ तपाईंलाई अंगालो मारेपछि धेरै पैसा ?
यो कुरा सत्य हो र भइरहेको छ । यी दुई महिला अहिले इन्टरनेटमा भाइरल बनेकी छन् । मानिसलाई गला लगाउने र निकै मायाका साथ सुताउने यिनीहरुको काम हो । यस्तै गरेर उनीहरुले घण्टामा ८० डलर कमाउने गरेकी छन् । अमेरिकाको कैनजस शहरमा मैरी नाम गरेकी एक महिला छन्, उनले मानिसलाई मायाका साथ सुताउँछिन् र वर्षमा २८ लाख कमाउँथिन् । उनी एक प्रोफेश्लन कडलर हुन्, आफूले सर्भिस दिएवापत् पैसा लिन्छन् ।
मैरी भन्छिन् यसो गर्नाले शरीरमा आँक्सिटोसीन हर्मोन सक्रिय भएर मानिसले आनन्द महसुस गर्दछन् । मैरीले एक सेशन १ घण्टादेखि ४ घण्टासम्म गर्छिन् । यसका लागि मैरीले कडा नियम बनाएकी छन् । क्लाइन्ट्सले पुरै समय कपडामा हुनुपर्ने हुन्छ । सेशनको बेला कुनैपनि समय फिजिकल डिजायर हुनु हुँदैन । गर्मी भएपछि टिसर्टसम्म लगाउन पाइन्छ । बढी छोटो लगाउन पाइँदैन ।
मैरीको यो काममा सिंगलदेखि विवाह गरेका आउन सक्नेछन् । मैरी आफूपनि विवाहित हुन् । उनको यो कामप्रति परिवारको सहयोग रहँदै आएको छ । उनका केटा साथीले हालसम्म कुनै तवरले मैरीलाई दुःख दिएका छैनन् ।